Ịzụta 4-DHEA ntụ ntụ (571-44-8) hplc ma98% | AASraw prohormone
/ ngwaahịa / Ihe nkuzi / 4-DHEA ntụ ntụ (571-44-8)
SKU: 571-44-8. Category: Ihe nkuzi
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram na usoro nchịkọta nke 4-DHEA ntụ ntụ (571-44-8), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nchịkwa mma.
Mgbe ịchọrọ ịmalite ike na ike ahụ ike, ndụmọdụ dịka 4-DHEA ntụ ntụ bụ otu ụzọ ị ga-esi nweta ezigbo ahụ ike na ahụ ike. 4-DHEA bụ ndụmọdụ nke na-akwalite njigide nitrogen, ike, na olu ọbara na-asọba na ahụ ike. Na-agbakwụnye 4-DHEA maka usoro ịme ume na ọzụzụ nke ụlọ gị nke nwere utịp utịp na obere mmetụta utịp.
4-DHEA ntụ ntụ
4-DHEA ntụ ntụ isi agwa
aha: 4-DHEA ntụ ntụ
Molekụla Formula: C19H28O2
Ọbara arọ: 288.42
Aha Mmiri: 4-DHEA ntụ ntụ
Aha ndị ọzọ: 4-Dehydroepiandrosterone, 4-DHEA ntụ ntụ, 571-44-8
4-DHEA ntụ ntụ Usage
5-DHEA bụ prohormone nke na-eme ka arụ ọrụ androgenic dị mma ma nwee ike weghachite akụkụ DHEA n'ime ahụ. Ọ na-anọgide na-arụ ọrụ ruo mgbe ememme ahụ na-akpata n'oge kwesịrị ekwesị. HHEM nke hormone nke glands na-emepụta, ma ụbụrụ na-emekwa ya. DHEA na-enye ohere maka mmepụta f androgens na estrogen, nke bụ uru kachasị mkpa ndị chọrọ ịbawanye ahụ ike na ahụ ike. Dị ka ahụ dị afọ, mmepụta DHEA n'anụ ahụ na-ebelata. Mbelata nke DHEA n'anụ ahụ na-eduga na ọrịa mberede, belata mmekọahụ, na osteoporosis.
4-DHEA ntụ ntụ bụ ihe ọmụmụ yiri nke DHEA dị n'ime ahụ. Uru nke ịgbakwunye 4-DHEA ntụ ntụ na ahụ ike gị na ike ike bụ atụmatụ buru ibu.
Emetre estrogenic dị ala na-ejikarị ọgwụ steeti anabolic. Ihe ndị na-akpata estrogenic gụnyere ntutu ihu na-abawanye, ara na ụmụ nwoke, obere anụ ara na ụmụ nwanyị, ntutu ihu nke ụmụ nwanyị, obere testes na ụmụ nwoke, na ịda mbà n'obi. 4-DHEA ntụ ntụ adịghị enwe mmetụta ahụ. Mmetụta mmetụta nke Estrogenic na-emeghachi omume, n'ihi ya, ha na-esi na estrogen emewanye.
Azụ ahịa na ụba nke nitrogen na-ejide na ahụ ike
Ịba ụba calorie ezubere iche maka nsị nke kachasị mma
Imezi usoro mmezi usoro
Mma ike ike
Mbelata oge ike ike ọgwụgwụ.
Mmetụta mmetụta yiri ya na nsonaazụ na-enweghị mgbu
Mmegide Na-arịwanye elu na mgbatị ahụ
Na-eme ka Mass Mass
Ọ bụghị Ume Imebi
Ngwunye 4-DHEA bụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị iji kwalite ikpo ahụ, ghara belata ya. Gwa onye ọkachamara ahụike gbasara ụzọ ndị a ga-esi gbakwunye gị iji gboo mkpa gị. Ọ dị mkpa ịgụnye 4-DHEA ntụ ntụ na nkwado usoro na usoro mgbatị. Ọ dịkwa mfe iji 4-DHEA ntụ ntụ na ụdị mpi iji belata ọnụahịa na usoro onunu chọrọ. 4-DHEA ntụ ntụ bụ akụkụ ọnụ nke na-etinye uche nke ọma ma nwee ike itinye uche n'ime ahụ ngwa ngwa site na iji liposomal capsules.
Kedu ihe nyocha nke 4-DHEA ntụ ntụ
4-Androsterone bụ mmiri mmiri, nke nwere ike anabolic nke na-agbanwe n'ime testosterone site na ngbanwe nke abụọ na absorption. Ọ bụ prohormone nke na-abụghị nke na-adịghị, nke pụtara na ọ nwere mmetụta dị ntakịrị ma ọ bụ nrụgide n'elu imeju na akụkụ nke onye ọrụ ahụ.
6-Andro na-arụ ọrụ nke ọma dị ka ihe nlekota ma ọ bụ jiri ndụmọdụ ndị ọzọ maka ịkụnye ihe. Na 700 ka 1,000 mg, ị ga-enweta nsonaazụ kachasị mma mgbe ejiri ya na otu ngụkọta mkpụrụ. Dị ka akụkụ nke nchịkọta, 4-Andro nwere ntụpọ ntụpọ dị n'etiti 300 na 500 mg.
Maka ndị mbido: na-agba 4-Androsterone maka 4 gaa na 6 izu na 300-500 mg.
Maka ndị ọkachamara na-eme ebere: gbalịa 4-Androsterone maka 6 gaa na 8 izu na 300-750 mg.
Otú 4-DHEA ntụ ntụ si arụ ọrụ
Ihe omumu bu ihe ngwọta maka ihe kachasi. Ihe omumu bu ogige nke ana ekwu okwu. Ihe omuma putara na onyinye ndia bu uzo ozo maka hormone. Na nke ha, ha adighi irè. Ọrụ ha bụ ikesa site n'ọbara. Ozugbo a gbanwere prohormone na hormone, ọ na-achịkwa ụkwara hormone. Chee echiche na prohormone bụ pro-protein nke na-atụgharị na protein iji melite arụmọrụ egwuregwu na ahụ ike. 4-DHEA ntụ ntụ bụ otu ụdị ndụmọdụ ahụ.
Mgbe e gbusịrị ya, 4-Andro abanye n'ọbara gị ma gbanwee n'ime testosterone. Ụlọ ọrụ ahụ ga-amalite inwe omume omume anabolic dị ịrịba ama, nke ga-eme ka ogo na ike na-abawanye mgbe ị na - eme ka ị na - enwe mmekọahụ - na - enye gị otu "Ecstasy Alpha Alpha".
4-Androsterone na-elekwasị anya na mmepe nke uru ahụ na-enweta kpọmkwem, gburugburu 8-12 pound nke ngwakọta ahụ ike n'ime 4 ruo 6 izu nke na-agba ọsọ prohormone ahụ. Rịba ama na mmetụta a ga-apụta ìhè karịa nri na mgbatị ahụ kwesịrị ekwesị.
Tụkwasị na nke a, na-atụ anya inweta ihe ndị a:
Ike na ike dị mma
Oge na-agbake ngwa ngwa
Ee, ịkwesiri ịkwado nkwado mgbe ị na-ewere 4-Andro ka ọ nwere ike imetụta ọbara mgbali gị. Nke a dịkwa mkpa maka nsogbu ọbara mgbali elu.
N'otu aka ahụ, ọgwụgwọ nke usoro mgbasa ozi (PCT) bụ akụkụ dị oké mkpa nke usoro ahụ dịka ọ ga-enyere gị aka ịnọgide na-arụpụta ihe mgbe ị na-enyere ahụ gị aka iji nwetaghachi nguzo hormoni oge niile.
E nwere mmetụta dị na nwunye ị chọrọ ịmara. 4-Andro nwere otu mmetụta dị otu ahụ dị ka 1-Andro.
Egwu nke ntutu isi, ihe otutu, ịgbatị prostate, ịmalite ịmịnye ọgwụ, ịba ụba n'ahụ akụkụ, nrụgide dị elu, na nsogbu ndị ọzọ gbasara obi.
LlL (ọjọọ) cholesterol ga-aga na HDL (ezigbo) cholesterol ga-agbadata. Ọ dịghị mma maka obi gị.
Kedu ụzọ ọ bụla, mmetụta ndị a ga-akwụsị izu ole na ole mgbe oge gị gasịrị. N'ihi ya, ha abụghị ogologo oge.
Mee ka ọbara rụọ ọrụ n'ihu, mgbe, na mgbe ị na-aga. Nwee usoro ọgwụgwọ na aka.
Ị nwere ike belata mmetụta ndị a site na nanị ịmelata ogologo oge gị na / ma ọ bụ ibelata usoro onunu ogwu.
4-DHEA ntụ ntụ Marketing
Ngwunye 4-DHEA nwere ihe ọ bụla
4-Andro enweghị obere mmetụta ọ bụla. Ị nwere ike ịnwe mgbanwe ntụgharị estrogen obere, mgbajiri ahụ ike, ọbara mgbali elu, mmegide ma na ụfọdụ gynecomastia (gyno).
Akwụsị nke estrogen dị mkpa iji belata mgbanwe ntụgharị estrogen ma zere nkwụsị nakwa dịka mmetụta ndị ọzọ metụtara etiti estrogen. A pụrụ ibelata mmetụta a ma ọ bụ gbochie ya kpam kpam site na ndozi mmezi kwesịrị ekwesị.
Esi zụta 4-DHEA ntụ ntụ si AASraw
4-DHEA ntụ ntụ Ezi ntụziaka: